Regional Manager for KEB Hana Microfinance | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Business Management Jobs - Regional Manager
•	HANA ၏ မဟာဗျူဟာကျသောရည်မှန်းချက်အစီအစဉ်အတိုင်း ဒေသအတွင်း အောင်မြင်မှုရရှိအောင် HANA ရုံးချုပ် နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	မိမိတာဝန်ကျရာဒေသအတွက် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ဘတ်ဂျက် ရေးဆွဲထားရမည်။
•	မိမိတာဝန်ကျရာဒေသအတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများကို ကြီးကြပ်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရပြီး ရုံးအသစ်ဖွင့်ရာ တွင်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	ရုံးခွဲများလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုများအဆင်ပြေချေမွေ့မှုများရှိစေရန်စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	ဒေသအတွင်းရှိ ရုံးခွဲများမှ တင်ပြလာသော ချေးငွေလျှောက်လွာများကို HANA ၏ သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများအတိုင်း ပြည့်မှီမှုရှိ မရှိ စစ်ဆေးခွင့်ပြုခြင်း ငြင်းပယ်ခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်ရမည်။ ဒေသအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ပြည့် မှီမှုရှိစေရန် စစ်ဆေးရမည်။
•	ဒေသခံအရာရှိအသစ်များကို လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	ရုံးခွဲရှိ ၀န်ထမ်းများကို သင်တန်းပေးခြင်း၊ ညွန်ကြားပြသခြင်း၊ သင်လျော်သော အကူအညီများပေးခြင်း နှင့် ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ ပြည့်ဝမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများရှိပါက တိကျမှုရှိစေရန် စစ်ဆေးရမည်။
•	မိမိတာဝန်ကျရာဒေသအတွင်းရှိ ရုံးခွဲများ၏ ၀န်ထမ်းများ၏အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိစေရန်၊ စွမ်းဆောင်ရည်များမြင့်မားလာစေရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် HANA မှ ချမှတ်ထားသောနည်းစနစ်များအတိုင်း ပြည့်စုံမှုရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	ရုံးခွဲများသို့သွားရောက်ပြီး စာရင်းဇယားများစစ်ဆေးခြင်း၊ ငွေသားလက်ကျန်စစ်ဆေးခြင်း ချေးငွေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရမည်။
•	ဒေသအတွင်းရှိ ရုံးခွဲများတွင်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်တာဝန်ခံနှင့် စာရင်းကိုင်များကို အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဋ္ဌာနသို့ လစဉ်ပေးပို့ ရသောစာရင်းများအား အချိန်မှီပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
•	ရုံးခွဲမန်နေဂျာနှင့် ဒေသခံအရာရှိများကို အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်လေ့လာခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းများနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့ အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	HANA ၏ လုပ်ငန်းများ ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အကြံဥာဏ်ကောင်းများပေးခြင်းဖြင့် ရုံးချုပ် နှင့် ရုံးခွဲများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု စဉ်ဆက်မပြက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
•	လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်၍ တာဝန်ပေးအပ်သော အလုပ်တာဝန်များကို ဆက်လက်၍ ကူညီလုပ်ဆောင်ရမည်။
•	လုင်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃နှစ်ရှိရမည်။
•	ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ခြင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းများ ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
Pearl Condo, Building No. B/404, Corner of Kabaraye Pagoda Road and Sayar San Road, Bahan Township.
•	မိမိတာဝန်ယူထားသော ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စ� ...
Title :	Assistant HR Officer Department:	HR Department Supervisor :	Assistant HR Manager Location ...
•	သက်ဆိုင်ရာနယ်ရုံးခွဲများအတွက် ရုံးခန်းင� ...
Position Purpose / General Description The Deputy General Manager is responsible to assist Senior General Manager in pr ...
•	to assist Executive Committee in overall company operation; •	to coordinate and attend board meetings and general ...
•	HANA ၏ မဟာဗျူဟာကျသောရည်မှန်းချက်အစီအစဉ်အတိ� ...
•	Accountable for the development and coordination of internal plan and activities •	Implement internal auditing po ...
Title:Call Officer Department:Call Center Supervisor:Risk Management Manager Location:Head Office Reporting to:Risk ...
•	ဒေသခံအရာရှိများမှ ရုံးခွဲမန်နေဂျာထံ တင်ြ ...
•	ချေးငွေ အထုတ်၊ အသွင်းနှင့်ပက်သက်သော စာရင� ...
•	သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကျမြို့နယ်၊ ကျေးရွာများသ ...
Main Duties & Responsible: 1.	Evaluate and improve the effectiveness of internal quality control system and, ensuri ...
•	ဖောက်သည်များဧ။် သတင်းအချက်အလက်များအား ငေ ...